छात्रवृत्ति - एनएलपी - मास्टर र पीएचडी
मालिक र पीएचडी प्राकृतिक भाषा प्रशोधन मा
पैसा को सोच बिना अनुसन्धान को6वर्ष
एक ऋण • कुनै अतिरिक्त workload • सरकार द्वारा ग्यारेन्टि छैन
कसरी मास्टर वा पीएचडी विदेश अध्ययन गर्न? कसरी अमेरिका मा अध्ययन गर्न? प्राकृतिक भाषा प्रक्रिया कहाँ अध्ययन गर्न? शीर्ष पत्रिकाहरूमा वैज्ञानिक लेख कसरी प्रकाशित गर्न? जहाँ मास्टर वा पीएचडी लागि राम्रो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न? पूर्ण वित्त पोषित मास्टर वा पीएचडी स्थिति खोज्दै हुनुहुन्छ?
(यो पाठ स्वतः तपाईंको सुविधाको लागि अनुवाद भएको थियो अंग्रेजी मूल । हामी कुनै पनि त्रुटि लागि क्षमा चाहन्छौं।)
यो प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रयोगशाला गणनामा अनुसन्धान को लागि केन्द्र (को सीआईसी) राष्ट्रिय पलिटेक्निक संस्थान को (IPN), मेक्सिको सिटी, मेक्सिको, एक थियोसिस संग कम्प्यूटर विज्ञान मा मास्टर वा पीएचडी डिग्री कमाउन लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति सीमित संख्या प्रदान गर्दछ प्राकृतिक भाषा प्रशोधन को क्षेत्र। एक मास्टर गरेको डिग्री कमाउन पछि, विद्यार्थीहरूले पीएचडी स्तर लागि लागू गर्न प्रोत्साहन दिइएको छ, र (तिनीहरूले पारित यदि; सामान्यतया तिनीहरूले के) को छात्रवृत्ति तदनुसार विस्तार गरिएको छ।
शीर्षकहरू समावेश, तर सीमित छैन, प्राकृतिक भाषा प्रशोधन (एनएलपी), कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान (सीएल), मानव भाषा प्रविधिहरू (HLT), र सम्बन्धित क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा। हाम्रो हेर्नुहोस् प्रकाशनहरू र theses बचाव हाम्रो अनुसन्धान चासो उदाहरण को लागि।
छात्रवृत्ति को रकम: मास्टर गरेको 600 USD, पीएचडी: 800 USD प्रति महिना लगभग (अवकाश सहित; यहाँ जानकारी अद्यावधिक गर्न सकिँदैन स्पेनिश मा)। यो सामान्य रहन र मेक्सिको सिटी मा एक कोठा भाडा लागि पर्याप्त भन्दा बढि छ। को छात्रवृत्ति एक ऋण छैन: तपाईँ यसलाई फर्कन अपेक्षा छैन; सेवा कुनै (जस्तै शिक्षा सहायताको रूपमा) आवश्यक छ। यहाँ मेरो छ हाम्रो छात्रवृत्ति बारेमा प्रस्तुति भारत तयार (सबै भन्दा शायद, तपाईंको काउन्टी लागू पनि)।
अवधि: मालिकका:2वर्ष (Extendable 2.5 गर्न सामान्यतया वर्ष) सम्म, पीएचडी: अप4वर्ष।
कार्यक्रम को प्रकार: अनुसन्धान। दुवै कार्यक्रम बरु आफ्नो कार्यक्रम कौशल सुधार गर्न भन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रकाशन गर्न उन्मुख छन्।
रोजगार: हाम्रो पीएचडी स्नातकहरूको को सबैभन्दा Academia मा कार्यरत छन् र यद्यपि शीर्ष कम्पनीहरु मा रोजगार को सफलता कथाहरू छन् governmentally, अनुसन्धान वित्त पोषित। हाम्रो MSc विद्यार्थी सामान्यतया पीएचडी स्तर जारी; जारी गर्न फैसला गरेको छ कि, ती Academia वा उद्योग मा कार्यरत छन्।
भर्ना: यहाँ हाम्रो एक विवरण छ भर्ना प्रक्रिया, तर पढ्न कृपया; तपाईं यस पृष्ठको तल नै लिंक पाउनुहुनेछ।
किन सीआईसी मा अध्ययन?
प्रमाणीकरण: हाम्रो पीएचडी र मालिकका कार्यक्रम दुवै मेक्सिकोमा धेरै केही कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रमाणित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्टता कार्यक्रम रूपमा एक हुन्।
कुलीन: सीआईसी एक कुलीन अनुसन्धान केन्द्र, कम्प्युटर विज्ञान मा अग्रणी राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र हो।
भविष्यमा: लगभग सबै हाम्रो को पीएचडी स्नातकहरूको राम्रो विश्वविद्यालय मा lecturers वा अनुसन्धानकर्ताहरूले, केही हो पोस्ट-डक्टरेट डिग्री। तिनीहरूलाई को भन्दा आफ्नो उत्पादकत्व एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त गरेको छ मेक्सिको को राष्ट्रिय शोधकर्ता। हाम्रो धेरै मालिकका स्नातकहरूको लागि अध्ययन गर्न जारी पीएचडी डिग्री, हामीलाई केही र युरोप, जस्तै केही, बेलायत वा फ्रान्समा।
गुणस्तर: हाम्रो विद्यार्थीहरूको धेरै प्राप्त महत्त्वपूर्ण पुरस्कार; ती तीन प्राप्त एक स्वर्ण पदक देश को राष्ट्रपति र एक हातमा देखि पनि प्राप्त माइक्रोसफ्ट रिसर्च ल्याटिन अमेरिका वृत्ति ।
सम्पर्क: हामी सक्रिय युरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, र ल्याटिन अमेरिका मा उत्कृष्ट अनुसन्धान समूहहरूसँग सहकार्य।
अवसर: थुप्रै हाम्रो विद्यार्थी पारित गरेको छ इन्टर्नशिप माइक्रोसफ्ट, Oracle, याहू!, र जेरक्स मा। हामी सबै भन्दा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय मा इन्टर्नशिप लागि कोष दिनुहोस्।
विजेता: हाम्रो विद्यार्थी छन् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु जित्यो प्रणाली र एल्गोरिदम को।
सलाहकार: हाम्रो प्राध्यापकहरू उत्कृष्ट छ प्रकाशन रेकर्ड छन् विज्ञान को मेक्सिकन एकेडेमी को शिक्षाविदों र उत्कृष्टता स्तर3को मेक्सिको को राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले (उच्चतम) वा2(दोस्रो उच्चतम), र पनि महत्त्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।
कोष: हाम्रो विद्यार्थी भुक्तानी आवश्यक शीर्ष पत्रिकाहरूमा साथै प्रकाशन लागि सम्मेलन (राष्ट्रिय क्षेत्र र विदेश केही अवस्थामा) उपस्थित लागि कोष प्रदान गरिन्छ।
गतिविधिहरु: हाम्रो विद्यार्थी जस्तै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन को संगठन भाग CICLing वा MICAI र यस्तो प्रतिष्ठित पत्रिकाबाट सम्पादन अन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू, मा उनको सलाहकारहरु मदत: CyS, IJCLA, POLIBITS जो हाम्रो प्रयोगशाला को प्राध्यापकहरू सम्पादकको-मा-प्रमुख हो।
माहौल: हामी प्राध्यापकहरू र विद्यार्थीहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय टोली छ। हाम्रो पीएचडी कार्यक्रम देखि प्राध्यापकहरू छ र हाम्रो प्रयोगशाला छ या विद्यार्थीहरू थियो । हाम्रो प्राध्यापकहरू supervising छन् वा theses निरीक्षण गरेका छन् ।
मैत्री वातावरण: हाम्रो प्राध्यापकहरू सहयोगी हो र हाम्रो विद्यार्थी मैत्री छन्; हामी सबै असल मित्र हो।
स्वतन्त्रता: हाम्रो विद्यार्थी तिनीहरूले मन विषय छनौट; हामी आफ्नो चासो भिज्न हुनेछ। हामी पनि उपस्थित रूपमा उदार छन् दिन वा परीक्षाहरू, आदि
पर्यटन: मेक्सिको धेरै रोचक र आकर्षक देश, इतिहास, संस्कृति, र प्रकृति मा समृद्ध छ। केहि आफ्नो घर ठाउँ फरक हेर्न आउनुहोस्!
अनन्त गर्मी: उत्तर मा जाडो frosts को बीचमा, तपाईंले सूर्य र Palms पाउनेछन्। कहिल्यै चिसो र लगभग कहिल्यै पनि तातो।
थप कारणहरू आवश्यक छ? आउनुहोस् र आफैलाई लागि पत्ता।
महत्त्वपूर्ण सम्मेलन वा पत्रिकाहरू मा प्रकाशन।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान शीर्ष विश्वविद्यालयहरु मा रहन्छ।
स्नातक मा, एक पीएचडी कार्यक्रम, हाम्रो साथ वा प्रमुख अन्य विश्वविद्यालयहरु मा प्रवेश।
शीर्ष पत्रिकाहरूमा बलियो प्रकाशन रेकर्ड।
सम्मान डिग्री र अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार।
स्नातक मा, को शीर्षक प्राप्त मेक्सिको को राष्ट्रिय शोधकर्ता वा आफ्नो देशमा बराबर।
बलियो ब्याज आत्म-प्रेरणा, सिक्ने र अनुसन्धान मा स्वतन्त्रता।
, विशेष प्राकृतिक भाषा प्रशोधन वा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुसन्धान चासो तपाईं सुझाव अनुसन्धान विषय अनुसार।
कार्यक्रम समाप्त गर्न निरपेक्ष संकल्प: स्वीकारे एक पटक, तपाईं कार्यक्रम समाप्त र डिग्री प्राप्त गर्नु पर्छ।
पीएचडी को मामला मा यस्तो अजिङ्गर रूपमा कार्यक्रम भाषा सिक्न इच्छुक संग, waived सकिएन हुनत कार्यक्रम वा पटकथा कौशल (आवेदन स्तर), आवश्यक छ।
यस्तो डाटा संरचना, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग भाषा को रूप कम्प्युटर विज्ञान को मूल कुराहरु, संग Familiarity; कार्यक्रम प्रविधी को राम्रो ज्ञान ठूलो प्लस छ।
वैज्ञानिक-प्राविधिक डोमेनमा पढाइ र लेखन: अंग्रेजी को राम्रो ज्ञान।
शीर्ष पत्रिकाहरूमा वैज्ञानिक कागजात प्रकाशित गर्न इच्छुक। लेखन र प्रकाशन संस्कृति प्राप्त गर्न इच्छुक। पीएचडी लागि, आईएसआई JCR-अनुक्रमित पत्रिकाहरूमा प्रकाशन स्नातक लागि आवश्यक छ।
यस्तो सम्मेलनहरुको संगठनको रूपमा ल्याब को गतिविधिहरु, भाग लिन इच्छुक र सामान्य मदत गर्न इच्छुक मा एक प्लस छ।
स्पेनी सिक्न इच्छुक एक प्लस छ: यो निकै आफ्नो जीवन यहाँ सरल थियो। अग्रिम स्पेनिश थाह आवश्यक छैन।
धैर्य: अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम को लागि लागू प्रमाणित अनुवाद, आदि सहित धेरै कागजी कार्रवाई आवश्यक हुन सक्छ
समाप्त राम्रो स्कोर संग अघिल्लो डिग्री: मालिकका लागि, बीएससी डिग्री समाप्त; पीएचडी लागि, मास्टर गरेको डिग्री समाप्त (बलियो उम्मेदवार बीएससी डिग्री संग स्वीकारे हुन सक्छ हुनत)।
विश्वस्त। अर्को चरण के?
: एक प्रोफेसर तपाईं सल्लाहकारमा रूपमा गर्न रुचि जो सम्पर्क अलेक्जेन्डर Gelbukh, Grigori Sidorov, Ildar Batyrshin, वा हीराम Calvo (; साथ प्रस्तुतिहरु अस्वीकार गरिनेछ एक मात्र चयन)। कृपया समावेश:
आफ्नो पूरा प्रकाशन रेकर्ड संग CV (कुनै छ भने) र कौशल (कुनै छ भने), अन्य सान्दर्भिक डाटा बीच। अघिल्लो डिग्री प्रमाणपत्र र स्कोर प्रतिलिपिहरु संलग्न उपयोगी हुनेछ।
किन एनएलपी को क्षेत्र मा काम गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं यसलाई के थाहा, वा के आफ्नो अनुभव सम्बन्धित विषयहरू छ?
विशेष किन सीआईसी अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं यसलाई के आशा गर्नुहुन्छ?
तपाईं स्नातक पछि आफ्नो योजना के हो? उदाहरणका लागि, यदि, मास्टर गरेको लागि लागू तपाईं पीएचडी जारी गर्ने योजना के?
हाम्रो हेर पुरस्कार पृष्ठ; आफ्नो नाम खत्म मा यसलाई चमक हुनेछ? तपाईं कसरी हामीलाई थप हाम्रो विद्यार्थी सम्मान र पुरस्कार प्राप्त को शेयर सुधार गर्न मदत गर्नेछ?
विषय: तपाईं आफ्नो थियोसिस लागि कुनै पनि विशिष्ट विचार छ? भने, हामीलाई केही विवरण दिन गर्नुहोस्। एक अनुसन्धान प्रस्ताव एउटा छुट्टै कागजात विशेष गरी पीएचडी लागि, एक प्लस छ।
हामी तपाईंलाई एउटा बलियो उम्मेदवार विचार भनेर हामी पुष्टि भने, हाम्रो मेरो विवरण उल्लेखित चरणहरू पालन गर्नुहोस् भर्ना प्रक्रिया (म हाल ज्यादातर पीएचडी स्तर लागि यो यस्तो लेखे; MSc लागि निर्देशनहरूको लागि हामीलाई सोध्न)। कृपया शंका मा भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिच्किचाउनुहोस्।
प्रश्न: अलेक्जेन्डर Gelbukh ।